English Archives - Page2of3- Balsirjana
नेपालको दुर्गम नार्फू गाउँ
मनाङ् जिल्लाभित्रको चार वटा गाउँपालिका मध्येको सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका नार्फू गाउँपालिका हो । यो गाउँ समुद्रि सतहबाट ४,४०० मिटर उचाइमा पर्दछ । चारैतिर हिमालले घेरिएर रहेको छ । यहाँ जम्मा ३०० जनसंख्या रहेको छ । टाढाबाट हेर्दा यो गाउँ सानो फूलबारी जस्तो देखिन्छ । यहाँको मुख्य पेशा भनेको...बाँकी
यहि हो मेरो देश नेपाल
किरणका झुल्काले हाल्छन् हिमालमा रातमा पौंडी खेल्छ जुनले दह होस् या तालमा । सेतो च्यादर ओडी हिमाल मुसुमुसु हाँस्छ रङगधरी डाँफे रमाउँदै नाच्छ । पहाडमा गुराँसले वनै रातो पार्छन् डाफे मुनाल कोकिलले नौलो भाका फेर्छन् । पाँच औले जटामसी चिराइतो पनि यार्सागुम्बा आदि धेरै जडिबुटी पनि। तराइमा धानका...बाँकी
धार्मिक स्थल : लुम्बिनी
संसारभरिकै करौडौं बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले धर्मप्राण ठानिआएको महामानव एवम् शान्तिदूत गौतम बुद्धजस्ता महान् विभूतिलाई जन्माउने पवित्र माटो पुनीत स्थलकै नाम ‘लुम्बिनी’ हो र यो लुम्बिनी नेपालको गौरवलाई विश्वभर फिँजाउने पावन भूमि हो । नेपाल र नेपालीहरूको शान्तिप्रियताको बखान विश्वव्यापी रूपमा गर्दै यस निर्मल भूमिले संसारभर सत्य, अहिंसा, मानवता र...बाँकी
BalsirjanaKapilbastuLumbiniTourism in Nepalलुम्बिनी
भाइबहिनीहरू ! असारको शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई गुरु पूर्णिमा भनिन्छ । गुरु पूर्णिमाका दिन गुरुको विेशष पूजा गरिन्छ । गुरु भनेको अज्ञानपरुपी अन्धकारलाई नाश गर्ने व्यक्ति हो । त्यही शिक्षा दीक्षा दिने व्यक्तिलाई खुशी पार्न गुरुको पूजा गरिन्छ । जो व्यक्ति खुशी हुन्छ उसले अरुलाई कति दिने भन्ने थाहै...बाँकी
Balsirjanaletter to editor
थ्रीडी चलचित्र भनेको के हो ?
थ्रीडी चलचित्र सामान्य चलचित्र झैं पर्दामै देखाइन्छ । यस्ता चलचित्र हेर्न भने विशेषप्रकारको चस्मा लाइन्छ । हाम्रा दुई आँखा एकअर्काबाट करिब ६५ मिलिमिटर टाढा छन् । त्यसैले दुईवटा आँखाका रेटिनामा दुई भिन्दाभिन्दै चित्र बन्छन् । यी दुई भिन्दा भिन्दै चित्रलाई हाम्रो मस्तिष्कले एउटै चित्रमा समायोजन गर्छ र हामी...बाँकी
बाघको छाला ओढ्ने गधा
कुनै गाउँमै शुद्धपट नाम गरेको एकजना धोबी थियो । कपडा धुने र सम्बन्धित कहाँ पु-याउने काम भएकाले काममा सजिलोका लागि उसले एउटा गधा पालेको थियो । खोलामा कपडा लैजाने बेलामा ऊ त्यसै गधामाथि भारी लाद्थ्यो र साँझपख कपडा लिएर फर्कने बेलामा पनि ऊ त्यही गधालाई कपडा बोकाउँथ्यो ।...बाँकी
एकादेशमा एउटा ठूलो शहर थियो । त्यहाँ ठूलो दरवार थियो । त्यो दरबारभित्र जाने बाटोमा फलफूलका बोट बिरुवाको झाडी थियो । त्यस झडीमा भँगेरा र भँगेरीको बस्ने गुँड थियो । त्यस दरबारमा धन दौलतको केही कमी थिएन । भँगेरा र भँगेरी दरबारको झ्यालबाट भित्र कोठामा जाने र आउने...बाँकी